Ndị Ikpe 14 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Ikpe 14:1-20
14 Samsịn wee gbadaa Timna+ hụ otu nwaanyị na Timna n’ime ụmụ nwaanyị ndị Filistia. 2 O wee gbagoo gwa nna ya na nne ya, sị: “Ọ dị otu nwaanyị m hụrụ na Timna n’ime ụmụ nwaanyị ndị Filistia, lụtaranụ m ya.”+ 3 Ma nna ya na nne ya sịrị ya: “Ọ̀ bụ na e nweghị nwaanyị+ ọ bụla n’ime ndị inyom ụmụnna gị mụrụ nakwa n’etiti ndị m niile, nke mere ị ga-eji gawa ịlụ nwaanyị nke si n’etiti ndị Filistia a na-ebighị úgwù?”+ Ma Samsịn gwara nna ya, sị: “Lụtara m ya, n’ihi na ọ bụ ya dị m nnọọ mma.” 4 Ma Nna ya na nne ya amaghị na ihe ahụ si n’aka Jehova,+ na ọ na-achọ ohere ọ ga-eji mee ndị Filistia ihe, ọ bụ ndị Filistia na-achị Izrel+ n’oge ahụ. 5 Samsịn wee soro nna ya na nne ya gbadaa Timna.+ Mgbe o ruru n’ubi vaịn ndị dị na Timna, lee! otu nwa ọdụm nke tojuru etoju nọ na-ebigbọ mgbe o zutere ya. 6 Mmụọ Jehova wee malite ịkpa ike n’ahụ́ ya,+ o wee dọwaa ya abụọ, dị nnọọ ka mmadụ si adọwa nwa mkpi, o jighịkwa ihe ọ bụla n’aka. Ọ gwaghịkwa nna ya na nne ya ihe o mere. 7 O wee gbadaa malite ịgwa nwaanyị ahụ okwu; ọ ka dịkwa mma n’anya Samsịn.+ 8 Mgbe nwa oge gasịrị, ọ gaghachiri ịkpọrọ ya laa.+ N’oge a, ọ banyere ka o lee ozu ọdụm ahụ, ma, lee, aṅụ bejuru n’ozu ọdụm ahụ, mmanụ aṅụ dịkwa na ya.+ 9 O wee kọnye ya n’ọbụ aka ya, na-aracha ya ka ọ na-aga ebe ọ na-aga.+ Mgbe ọ gakwuuru nna ya na nne ya, o nyetụrụ ha ozugbo, ha wee malite ịracha ya. Ọ gwaghị ha na ọ bụ n’ozu ọdụm ka ọ kọtara mmanụ aṅụ ahụ. 10 Nna ya wee gakwuru nwaanyị ahụ, Samsịn wee kpọọ oriri n’ebe ahụ;+ n’ihi na ọ bụ otú ụmụ okorobịa si eme. 11 O wee ruo na mgbe ha hụrụ ya, ha kpọtara ndị ikom iri atọ ozugbo, ka ha nọnyere ya. 12 Samsịn wee sị ha: “Biko, ka m tụọrọ unu otu ilu.+ Ọ bụrụ na unu agwa m ihe ilu a bụ n’ime ụbọchị asaa+ a ga-eri oriri a ma kọwaa ya, m ga-enye unu uwe ime iri atọ na uwe elu iri atọ.+ 13 Ma ọ bụrụ na unu enweghị ike ịgwa m ya, unu onwe unu ga-enye m uwe ime iri atọ na uwe elu iri atọ.” Ha wee sị ya: “Tụọ ilu gị ka anyị nụ.” 14 O wee sị ha:“Ihe a na-eri eri si n’ihe na-eri ihe+ pụta,Ihe dị ụtọ sikwa n’ihe dị ike pụta.”+ Ma ha enweghị ike ịkọwa ilu ahụ ruo ụbọchị atọ. 15 O wee ruo n’ụbọchị nke anọ na ha malitere ịgwa nwunye Samsịn, sị: “Ghọgbuo di gị ka ọ kọwaara anyị ilu ahụ.+ Ma ọ́ bụghị ya, anyị ga-agba gị na ụlọ nna gị ọkụ.+ Ọ̀ bụ ka unu nara anyị ihe anyị+ mere unu ji kpọọ anyị ebe a?” 16 Nwunye Samsịn wee malite ibere Samsịn ákwá,+ sị: “Ị kpọrọ m asị, ee, ị kpọrọ m asị, ị hụghị m n’anya.+ Ọ dị ilu ị tụụrụ ndị m,+ ma ị gwaghị m ihe ọ bụ.” O wee sị ya: “Akọghịrị m ya ọbụna nna m na nne m,+ m̀ kwesịrị ịkọrọ gị ya?” 17 Ma ọ nọ na-ebesara ya ákwá ruo ụbọchị asaa a nọ na-emere ha oriri, o wee ruo n’ụbọchị nke asaa na ọ kọọrọ ya, n’ihi na ọ nọ na-enye ya nsogbu.+ O wee gaa gwa ndị ya ilu ahụ.+ 18 Ndị obodo ahụ wee sị ya n’ụbọchị nke asaa, tupu ya abanye n’ọnụ ụlọ dị n’ime:+“Gịnị dị ụtọ karịa mmanụ aṅụ,Gịnịkwa dị ike karịa ọdụm?”+ O wee sị ha:“A sị na ọ bụghị nwa ehi m ka unu ji kọọ ihe,+Unu agaraghị enwe ike ịkọwa ilu m.”+ 19 Mmụọ Jehova wee malite ịkpa ike n’ahụ́ ya,+ o wee gbadaa Ashkelọn+ gbuo ndị ikom iri atọ n’etiti ha, chịrị uwe o yipụrụ ha chịnye ndị kọwara ilu ahụ.+ Iwe dị ọkụ nọ na-ewe ya, o wee laa n’ụlọ nna ya. 20 Otu n’ime ndị nọnyeere+ Samsịn mgbe ọ gara ịlụ nwaanyị wee lụwazie nwunye ya.+
Ndị Ikpe 14